jeudi, 27 octobre 2016 06:15
Finoana : 185 taona nijoroana izao ny Fiangonana Malagasy Voalohany
1831-2016 : 185 taona nijoroana izao ny Fiangonana Malagasy Voalohany eto Madagasikara dia ny teo Ambatonakanga izany. Hisy hetsika ara-koltoraly kanefa ara-pivavahana hatao ao amin’ny FJKM Tranovato Ambatonakanga amin’ny alahady 30 oktobra izao, hahitana fampirantiana tantara sy sary ary antsam-piderana handraisan’ny Lehilahy Midera anjara.
mercredi, 26 octobre 2016 10:53
Maroantsetra : Misokatra androany ny taom-piotazana jirofo
18.000Ar ka hatramin’ny 20.000Ar ny kilaon’ny jirofo any Maroantsetra amin’izao fisokafany izao. Manantena ny mpamokatra fa mbola hiakatra io.
mercredi, 26 octobre 2016 10:46
Fihaonambe : Tanterahina eto koa ny an’ny FIDEF
Mampiantrano ny fihaonambe faha-16 ny FIDEF (Fédération Internationale des Experts-Comptables et Commissaires aux Comptes Francophones) i Madagasikara. Nanomboka omaly eto Antananarivo izy ity, ary andraisan’ny firenena miisa 48 anjara. Namporisika ireo matihanina eo amin'io sehatra io ny Filoha Rajaonarimampianina mba hiompana tokoa amin'ny fampandrosoana ny asa iantsoroan'izy ireo ary hibanjina hatrany ny fanalavirana izay mety ho endriky ny fahalovana satria izay no rafi-pisainana sy fahaiza-manao noratovina. Tombony lehibe ho anareo, hoy izy, raha nanokatra ny fivoriana, ny fisian'ny kolontsaina maro lafy, kanefa afaka manao saina miara-mitsinjo ny ampitso ao anatin'ny Frankofonia.
mercredi, 26 octobre 2016 06:27
Fifandonana tao Ampasimbe Manantsatrana : Nidoboka am-ponja hatramin’ny moana marenina
Tazomina am-ponja vonjimaika ao Ambalatavoahangy ny 23 amin’ireo 25 nosamborin’ny mpitandro ny filaminana taorian’ny fifandonana nahafatesana olona iray tamin’ireo valo naratra mafy ny 14 oktobra 2016, nametrahana tamin’ny toerany ny Ben’ny tanàna nandresy teo anivon’ny Fitsarana, Jacob Honoré. Misy tovolahy iray sady moana marenina no tsy mahay mamaky teny sy manoratra anisan’ireo miandry fitsarana ao am-ponja ireo. Mifanontena ny olona hoe: tamin’ny fomba ahoana no nilazana taminy ny lalàna sy ny heloka vitany ka nampidirana am-ponja azy izao.
mercredi, 26 octobre 2016 06:24
Sambava : Miofana ny mpiompy
Tantsaha, mpiompy 80 mianaka eo, avy amin'ireo Distrika efatra mandrafitra ny Faritra SAVA, no miatrika fiofanana momba ny fiompiana akoho manatody lava sy fakana nofony ary kisoa. Nanomboka omaly talata 25 oktobra ary haharitra efatra andro ny fiofanana. Teo aloha hoy ny solontenan'ny Faritra dia mbola nanafatra izany akoho fakana nofony avy any an-tany lavitra ny Faritra SAVA fa amin'izao dia efa hita manerana Distrika ny firoboroboan’ny fiompiana, ary ireto mpiompy 80 ireto dia hanatevin-daharana an'izany aorian'ny fiofanana.
mardi, 25 octobre 2016 11:56
Farafangana : Manomboka ny fanamboaran-dalana
Haharitra roa volana ny asa, ka ny lalana miazo ny seranam-piaramanidina no voakasik’izany ary hatao tara. Noho ity fanamboarana ity dia voatery tsy maintsy nasitaka any amin'ny roa metatra ireo trano sy fefy manamorina ny lalana. Tsy nandà ny fandaminana ireo olon-tsotra fa ny fanontaniana mipetraka dia ireo trano vato izay an'ny mpanana sy olona ambony ka ho sahy handrava an'io ve ny fiadidiana ny tanànan'i Farafangana ?
Fenoarivobe : Mivory ireo Pretran’ny Diosezy Katolika Tsiroanomandidy
Mampiantrano fivorian’ireo Pretra ao anatin’ny Diosezy Katolika Tsiroanomandidy ny tanànan’i Fenoarivobe manomboka androany ary haharitra telo andro. Pretra 70 lahy eo, avy any Melaky, Bongolava ary ampahany amin’ny Faratr’i Menabe izay mandrafitra ny Diosezy Katolika Tsiroanomandidy no mikaon-doha, mizara traikefa ary mandinika ny fiainam-bahoaka, tarihin’ny Eveka, Mgr Gustavo Bombin Espino. Mandritra io fivoriambe io ihany koa no handrafetana ny tetiandro hitantanana ny fiainan’ny Fiangonana ao anatin’ny Diosezy.
mardi, 25 octobre 2016 11:53
Maroantsetra : Hifidy Sefom-pokontany
Hotanterahina ny sabotsy 29 sy ny alahady 30 oktobra ho avy izao ny fifidianana Sefom-pokontany sy ny lefiny, manerana ny Distrikan’i Maroantsetra. Ny sabotsy 29 no daty voafaritra teo ampiandohana saingy vanimpotoana fiakaran’ny jirofo izao, ka izay no hanatanterahana ny fifidianana ny alahady ho an’ny Kaominina vitsivitsy.
Page 319 sur 422